China canned tomato paste 70g fekitari uye vagadziri Tomato
Tomato paste ndeimwe yezvokudya zvezuva nezuva. Inogona kuita kuti chikafu chive chinonaka uye chine hutano kuvanhu. Tinogona kuita mhando dzakasiyana zvichienderana nezvinokumbirwa nevatengi uye musika mhando yemhando, iyo puru yakajairika matomatisi echisikirwo mutsvuku, 100% isina zvinowedzerwa, gobvu uye isina mvura. Tinogona kuita GINO yemhando yemadomasi.
"Hunhu hwekutanga" inogara iri chirevo chedu chekugadzira madomasi.
Fekitori yedu inovhara nharaunda yemamirimita mazana mashanu makumi masere neshanu, nemazana mashanu emazana emamirimita, yazvino kugadzirwa kuri matani makumi matanhatu nemazana matanhatu, isu tine gumi nematanhatu matomatisi matomatisi uye sachet matomatisi ekugadzira matanda, ayo anogona zvigadzirwa nemhando dzemhando, senge 70g yakakanyiwa nyanya nyanya, 140g yakakoshwa matomatisi, 198g yakakanyiwa matomatisi, 200g yakakanyiwa matomatisi, 400g yakakanyiwa matomatisi, 800g yakakanyiwa matomatisi, 830g yakakanyiwa matomatisi, 850g yakakanyiwa nyanya matomatisi, 1000g yakakanyiwa matomatisi, 2200g yakakanyiwa matomatisi, 2.2kg + 70g yakakanyiwa matomatisi, 3kg yakakoshwa madomasi matomatisi, hukuru hukuru 4.5kg yakakanyiwa matomatisi matomatisi etc.
Misika yedu mikuru ingangoita nyika dze Africa, Middle East, USA uye maSouth America nyika dzinopfuura nyika makumi manomwe neshanu nematunhu.
Isu tinoshandisa epamberi muchina, vharuvhu kurongedza muchina. Iyo midziyo ichave yakanyanya kukosheswa uye yakaoma, uye huwandu hwakawanda hwezvigadzirwa hucharemerwa, tinogona kusevha imwe mutengo kwauri.
Uye edu ese magaba ane chena kana yero zvedongo kupfeka mukati kudzivirira ngura uye chengetedza mhando yakanaka yemadomasi.
1. Tinogona kupa vatengi masampuli zvakasununguka, zvinongoda vatengi kuti vamire yekutakura, uye chii chimwe, isu tine yedu DHL account ne50% dhisikaundi, iwe unogona zvakare kubhadhara isu kutakura zvisati zvaitika uye isu tobva takutumira masampuli na account yedu, iyo ichaponesa mutengo wakanyanya kwauri!
2. Yedu yekubhadhara nguva ndeye 30% dhipoziti uye chiyero chinofanira kuitirwa nekopi yeB / L, kana naL / C, tinofanirwa kuongorora kaviri uye kusimbisa kana ichigona kugamuchira.
4. SGS neBV zvese zvinogamuchirwa, unogona kungobata navo kana uchida.
5. Halal, ISO, HACCP uye FDA zviripo.
6. Isu tine yedu nyanzvi yekugadzira, inogona kugadzira dhizaini nekukurumidza uye nekukurumidza.
Pashure: madomasi nyanya 2200g
Zvadaro: Chakakangwa madomasi namatidza 70g (2)
Kugadzira Tomato Nyora
Masikisi Akasiyana Tomato Namatira
Kaviri Concentrate Tomato Namatira
Flat Sachet Tomato Namatira
Yakakwira Hunhu Tomato Nyatso
Homwe Tomato Namatidza
Tomato Namatira China Mutengesi
Tomato Namatira Kusauce
Wholesale Tomato Nyatso
Zvomumagaba matomatisi namatidza 400g